"कहानी बनेन केही यस्तै भाे मेराे जिन्दगी", केे गर्दैछन् तिलकसिँह पेला अचेल ? - Everest Dainik - News from Nepal
“कहानी बनेन केही यस्तै भाे मेराे जिन्दगी”, केे गर्दैछन् तिलकसिँह पेला अचेल ?
कुनै समय तत्कालीन सुदूर र मध्यपश्चिम लगायत देशैभरि निकै मन पराइएका ‘लुकाउन खोज्दा पनि आँसु नझरेको हैन…’, कुल्चेर मेरो फूल अरु नै रोज्यौ कि?’, कहानी बनेन केही यस्तै भो मेरो जिन्दगी..’ जस्ता कर्णप्रिय गीत गाएर एकाएक चर्चामा आएका तिलकसिंह पेला शास्त्रीय सङ्गीतको अनवरत साधनामा यसरी हराए कि उनी २१ वर्षपछि बल्ल दोहोऱ्याएर म्युजिक नेपालको स्टुडियो छिरे, गीत रेकर्ड गराउन ।
२०५४ सालमा बैतडीबाट भारतको बाटो हुँदै आधुनिक गित रेकर्ड गराउनका लागि राजधानी काठमाडौँ पुगेका तिलकले ‘आँसु’ एल्बमका लागि गाएका गीत आज पनि त्यो पुस्ताले बिर्सेको छैन । तर तिलक सङ्गीतको चल्तीको बजारबाट एकाएक हराए । थोरैलाई मात्र थाहा छ, यस अवधिमा तिलक सङ्गीतको साधनामा चुर्लुम्म डुबे । उनले प्रयाग सङ्गीत महाविद्यालयबाट सङ्गीत प्रवीण अर्थात् एमम्युजको उपाधि हासिल गरे ।
सुदुरपश्चिममा उदाएका कलाकारहरुले देउडा बाहेक अन्य गीतमा छाप छोड्न सक्दैनन भन्ने मानसिकता पनि हावी थियो। तिलकले एउटा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिए ।
साठीको दशकमा उनले राजधानीमा एउटा सङ्गीत विद्यालय खोले, श्रीकृष्ण गुरुकुल सङ्गीत पाठशाला । यो पाठशाला उनको सतत साधनाको केन्द्र मात्र बनेन यसले थुप्रै आश लाग्दा सङ्गीत प्रतिभाहरू समेत उत्पादन गरिसकेको छ ।
उनी आफूलाई प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं सङ्गीत गुरु धनबहादुर गोपाली र बनारस घरानाका गुरु पण्डित देवाशीष डेका शिष्य भनेर चिनाउन चाहन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरमा परिपक्वताका लागि रियाजका साथै गुरुको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । म समय पाउनासाथ गुरुहरू कहाँ पुगिराख्छु ।’ उनी आज पनि बर्सेनी बनारस पुग्छन्, गुरु देवाशीष डेलाई भेट्न, ‘त्यहाँको सांगीतिक माहौल नै बेग्लै हुन्छ ।’ उनी भन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस शास्त्रीय सङ्गीतमा रमाउँदै, साधक जन्माउँदै
भीडभाड र चर्चाबाट टाढै रहने तिलकले थुप्रै शिष्यहरूलाई सिकाइसकेका छन् र उनको विद्यालयका प्रशिक्षार्थीहरूले विभिन्न मंचहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर उनी आँसुपछि आँसु भाग दुई र बिछोडको आँसु एलबमपछि उनी आफू भने सुगम सङ्गीतको गायनमा त्यति देखा परेनन् । यस अवधिमा उनले रियाज गरे, गराए ।
‘अहिले प्रविधिले निकै पर्रिवार्तन ल्याएको छ । र यसले कलाकारहरूलाई अझ परिश्रम गर्नुपर्ने र खारिएर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।’
उनका शिष्यहरूमध्ये रिदम कँडेल अहिले चल्तीका सङ्गीत एरेंजर छन्, कमल बिष्टले रेडियो नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रिय आधुनिक गीत प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन्, त्यस्तै अहिले कान्तिपुर टिभीमा चलिरहेको सङ्गीतको रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपालमा प्रभावकारी शास्त्रीय गायनका मध्यमले सबैको मन जित्न सफल सुशील गड्तौला उनकै गुरुकुलका उत्पादन हुन् ।
तर २१ वर्षपछि तिलक एकाएक म्युजिक नेपालको स्टुडियोमा देखा परे संजय जुग्जालीको रचना ‘हरेक दिन साँझ फर्केर आउँछ…’ बोलको गजल गाउन । र यससँगै उनले आठवटा गीतहरू रेकर्डिङको तयारीमा रहेको समेत बताए ।
याे पनि पढ्नुस तिलकसिंह पेलाले गाए 'मोरा साँवरा...!'
यसबीच सङ्गीतको प्रारूप पनि फेरिइसकेको छ । त्यसबेला लाइभ अर्केस्ट्रामा रेकर्ड गरिने गीतहरू अब मल्टीट्रयाक रेकर्डिङमा ट्रयाक बनाएर गरिन्छ । सङ्गीतको बजारले समेत रुप फेरिसकेको छ । पहिले क्यासेट एल्बममा आधारित बजार अब डिजिटलाइज भइसकेको छ र अब शेयर र भ्युमा निर्भर रहन थालेको छ । तिलकलाई यस कुराको राम्रो ज्ञान छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रविधिले निकै पर्रिवार्तन ल्याएको छ । र यसले कलाकारहरूलाई अझ परिश्रम गर्नुपर्ने र खारिएर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।’
तिलक आफ्नो सङ्गीत यात्रामा धनगढीमा बसेर साहित्य साधना गरिरहेका आफ्ना दाजु कृष्णसिंह पेलाको योगदान बिर्सनै नसकिने रहेको बताउँछन् । उनले आफूलाई निरन्तर प्रेरित गरिराख्ने भएरै आफ्नो विद्यालयको नाम समेत ‘श्रीकृष्ण गुरुकुल’ राखेका हुन् । तिलक भन्छन्, ‘दादाको भूमिका शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्न । वहाँले मलाई जुन सपना देखाउनु भयो, त्यो आज मेरो हिंड्ने बाटो बनेको छ ।’
हुन त सुदुरपश्चिमबाट थुप्रै कलाकारहरू उदाए र चर्चा समेत कमाए तर तिनमा एउटा कुरा साझा थियो- सबैले लोक सङ्गीत र त्यसमा पी देउडासम्म आफूलाई सीमित पारे । तिलक सुरुदेखि नै फरक र केही अपरिचित बाटोमा हिँडे र उनले साधनाको क्रममा थुप्रै चुनौती र अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्यो । तर उनी न कहिल्यै निराश भए न सफलतामा फुर्किए । न उनले अप्ठ्यारा दिनहरूमा कुनै अन्य विकल्प नै सोचे । उनी भन्छन्, ‘मेरो त हिँड्ने मूलबाटो पनि सङ्गीत भइदियो र वैकल्पिक बाटो पनि सङ्गीत । अन्य कुरा सोच्ने न फुर्सत भयो, न आवश्यकता नै ।’
२०५४ सालमा बैतडीबाट भारतको बाटो हुँदै आधुनिक गित रेकर्ड गराउनका लागि राजधानी काठमाडौँ पुगेका तिलकले ‘आँसु’ एल्बमका लागि गाएका गीत आज पनि त्यो पुस्ताले बिर्सेको छैन ।
उनी अहिले पनि सम्झिन्छन् २१ वर्ष अगाडि सुदूपश्चिमको कलाकारले आधुनिक गीत गाउँछ भन्दा साङगीतिक क्षेत्रका धेरै हस्तीहरुले समेत मजाकको विषय बनाउँथे। सुदुरपश्चिममा उदाएका कलाकारहरुले देउडा बाहेक अन्य गीतमा छाप छोड्न सक्दैनन भन्ने मानसिकता पनि हावी थियो। तिलकले एउटा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिए । त्यति मात्र हैन दशरथचन्द नगरपालिका-६ कुरालामा जन्मिएका तिलक सुदूरपश्चिमबाट आधुनिक गीतको एल्बम निकाल्ने पहिलो कलाकारको रूपमा समेत चिनिए ।
याे पनि पढ्नुस बजारमा ‘बिग्रिएका केटा केटी’
२१ वर्षको अन्तरालपछि स्टुडियो पस्नुका पछाडिको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘मैले लामो समयदेखि केही गीतहरू निरन्तर मंचमा गाउने गरेको छु, ती कुनै न कुनै रूपमा मेरो अभिभारा भित्र पर्दछन् । ती गीत मेरो स्वरमा रेकर्ड गराए मैले ऋण तिरेको मान्ने थिएँ ।’
रेकर्डिङस्थलमा उनीसँगै रहेका उनका शिष्य एवं चर्चित एरेन्जर रिदम कँडेललाई आफ्नो गुरुको क्षमतामा पूर्ण विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘गुरुले जहिले पनि उत्कृष्ट टेक दिने कोशिस गर्नुहुन्छ ।’
ट्याग्स: Classical music, nepali music, Tilak Pela